PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-01 - Ubalekele umkhehlo owakhethwa ebandleni
Ubalekele umkhehlo owakhethwa ebandleni
Isolezwe ngeSonto - 2017-01-01 - IZINDABA - Ebika KwaHlabisa
INGODUSO eyanyamalala kufanele ikhehlwe ngabasemzini wayo ngoDisemba 16 ifonele abakubo yabatshela ukuthi ibalekele umkhehlo ngoba ibingafuni ukushada nesoka, ngenxa yokuthi ucu alusahlangani.
UNksz Nokuthula Zwane (19) wasoPhaphasi, KwaHlabisa, ubezokhehlwa yisoka lakhe uMnuz Khulani Khanyi (34) waseNkanjini, KwaHlabisa kodwa sekubhuntshe konke lokho ngoba wanyamalala ngoNovemba ebuya esikoleni akaziwa ukuthi ukuphi.
Isolezwe ngeSonto liye ekhaya konina likaNksz Zwane kwaNgcamu Ophaphasi (okungumndeni owamukela ilobolo), lathola ukuthi akakabuyi. Unina uNksz Bongeni Ngcamu, uthe ibaphethe kabi le nto eyenziwa yindodakazi yakhe ngoba yathula kwenziwa zonke izinhlelo zomcimbi womkhehlo kodwa yakhetha ukubaleka ngemizuzu yokugcina.
“Waba yingxenye yokubhalwa kwezincwadi zithunyelelwa amathempeli ahlukene, waphinde wayokala ingubo abezoyigqoka ngomkhehlo. Kodwa usesitshela ukuthi akasamfuni uKhanyi,” kubalisa uNksz Ngcamu.
Uqhube wathi utholakale emva kophenyo olwenziwe ngamaphoyisa aseZibayeni, afune umfana owagcina ukubonakala ehamba naye esikoleni, kwatholakala inombolo yakhe entsha yocingo aseyisebenzisa, wafonelwa watholwa.
“Okungixaka kakhulu ukuthi athi amaphoyisa ngeke angitshele ukuthi ukuphi ngoba uNokuthula uwadonse ngendlebe ukuba angasho. Sizoyobonana nomphathi-siteshi wamaphoyisa sicele asisize ngoba asazi ukuthi ukuphi nendawo futhi uhleli kanjani,” kubalisa uNksz Ngcamu.
Umalume kaNksz Zwane uMnuz Dumsani Ngcamu, uthe ufonelwe uNokuthula wamtshela izizathu zokubaleka kwakhe.
“Umshana ubeke isizathu sokuthi ubaleke ngoba ubengasamthandi uKhanyi, ubone ukuthi uma ekhehla uzobe eseganiswa ngenkani. Uma ngimbuza ukuthi wayephoqwe ngubani ukuthi amqome, akaphumeli obala. Uthe akekho use-Eastern Cape futhi wangacacisa ukuthi uhleli nobani,” kusho uNgcamu.
Umndeni wakwaNgcamu ufuna izincazelo emaphoyiseni aseZibayeni ukuthi uma kwenzeka umshana wakhe ehlelwa ngokubi ngeke yini badingeke njengomndeni omkhulisile njengoba amaphoyisa ebatshele ukuthi ngeke bamthole ngoba wathi angasho ukuthi ukuphi.
Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal uColonel Thulani Zwane ucele ukuthunyelelwa yonke imininingwane ngodaba ukuze baqale uphenyo. Imizamo yokuxhumana nesoka uKhanyi igcine ingaphumelelanga njengoba ethe asibuye simthinte usasebenza okuthe sibuyela kuye ubengasalubambi ucingo.
UNksz Ngcamu uthe ngosuku aduka ngalo uNokuthula wayekade efakelwe imali nguKhanyi okuthiwa namanje isamdida eyokuthi isimalile ingoduso yakhe.